Kocaoğlu: "Akunjalo nje imithi kodwa kunye namajendeni"
Usodolophu wase-İzmir uMasipala wase-Metropolitan u-Aziz Kocaoğlu uxele ukuba bakhusele umhlaba oxabisekileyo kwisoyikiso sokubulela kwi-Inciraltı I-Urban Forest abayimiselayo ngokutyala imithi eyi-30. [More ...]
I-Airport yase-Istanbul Ixhotywe nge40 Thousand Abagibeli be-52 ngoNovemba
Ukufika kunye nokusuka kwisikhululo seenqwelomoya i-Istanbul kude kube sekupheleni kukaNovemba, abagibeli be40 abangamawaka e-52 bahambe. Isigaba sokuqala se29 savulwa ngo-Okthobha, I-Airlines yaseTurkey (i-THY) iinqwelomoya ezindulwayo kwezinye izixeko [More ...]
Izitulo ze-İzmit YHT
Izmit Railway Station iyaqhubeka nokusebenza ngokugqitywa koLoliwe oPhezulu, ngelixa i-YHT yangaphambili ingakhange imkholise ummi. [More ...]
Uhambo lwezobugcisa ukuya kwi-Çanakkale Bridge ukusuka eBursalı Engineers
Iofisi ye-IMO Bursa iyaqhubeka notyelelo lobuchwephesha ukuze yandise ukukhula kwamalungu ayo kwaye iqinisekise ukuba bayabona iiprojekthi zesampula. Amalungu eSebe le-IMO Bursa, xa egqityiwe, yeyona bhulorho inde kakhulu emhlabeni [More ...]
UTürel Uphulaphule iingxaki zabathengisi kwizithuthi
USodolophu uMenderes Türel, ohlangane nabathengisi bezothutho, wathi umkhankaso wokunyelisa waqalwa malunga nezohlwayo zokuhamba kwezithuthi kwi-TEDES-EDS wathi: daha ukwakhiwa kwale nkqubo akuzange kusebenze. Esi sohlwayo sini [More ...]
Isithuthi esigqithileyo kwisithuthi siyakwakhiwa endaweni yokuwela inqanawa eya kuthengwa ukuTshitshiswa kweCatenary-Umsebenzi wokuthengwa kweenkonzo zeNdibano
UMasipala weNqila ye-Ankara, imicimbi yezempilo yoluntu enxulumene ngokusondeleyo nezifundo zamatyala zisayiniwe. Kuthathelwa ingqalelo izifo ezenzeka ngexesha kunye nezifo, icandelo loLawulo Jikelele lwe-EGO lenze ucoceko olupheleleyo ngakumbi kwiibhasi ezisetyenziswa rhoqo ngabemi. [More ...]
U-İzmir Büyükşehir Akazange avumele uKosa ukuba abe ngumhla wokuQala ngaphandle kwe-İZBAN
Umasipala wase-Izmir Metropolitan wahlanganisa zonke izibonelelo zawo kuthutho lukawonkewonke ngenxa yesitrayikhi se-IZBAN esiqale kusasa kodwa zange sivumele isiphithiphithi nangona ibilusuku lokuqala lokusebenza evekini. I-Izmir Metropolitan Municipality, eneepesenti ze-TCDD [More ...]
I-Target ye-Passenger YHT i-2018 Million kwi-8
Ibango lokukhwela linyuka minyaka le kumawaka eekhilomitha ze-213 zeendlela zesantya esiphezulu esisebenzayo esiqhutywa liCandelo eliSentloko lezoThutho lwe-TCDD. I-Ankara-Eskişehir e-2009, Ankara-Konya e-2011, u-Eskişehir-Konya e-2013, e-Ankara-Eskişehir-İstanbul nase Konya-İstanbul e-2014 [More ...]
Ukubetha Kwaqala kwi-İZBAN Gre Strike Ukuqhawuka kunye neenjini ezihlala phantsi
Inkqubo yedolophu engaphantsi yedolophu i-Izmir yaqala isiteleka namhlanje ekuseni kusetyenziswa amalungelo omgaqo-siseko wabasebenzi be342 e-ZBAN. Kwelinye icala, ulawulo lwe-İZBAN luqhubele phambili ukuhamba ngeenqwelomoya phakathi kwe-Çiğli-Isikhululo senqwelomoya kunye noomatshini abasixhenxe abathathe umhlala phantsi basebenza njengabaphule uqhankqalazo '. [More ...]
I-IİBB's Pre-strike Description
Ulawulo lwe-İZBAN lubanga ukuba isebe le-İzmir le-Railway Workers 'Union (i-Demiryol-İş), eligqibe ngokuqhwaba ngomso, lihlabe abantu be-İzmir kunye nabaqeshwa, kwaye ukuba umvuzo ophakathi ungene ngenxa yeziphakamiso ze-22 ze-İzmir [More ...]
Awunecala kwintlekele yesitimela e-Çorlu
UBilgin, ophulukene nezihlobo ezine kule ngozi, uphendule kuManejala Jikelele we-TCDD uApaydın owathi imvula inoxanduva lentlekele yoololiwe e -orlu. [More ...]
Abasebenzi abathungathelweyo abakwiSitishi
I-CHP Niğde Isekela lika-Omer Fethi Gurer, ICandelo loMlawuli Jikelele le-TCDD kwintlanganiso yeKomishini ye-SEE apho kuxoxwe khona ngohlahlo-lwabiwo mali, yazisa ingxaki yabasebenzi abanamava kwiziko. U -mer Fethi Gürer uthe abasebenzi abasebenza ngaphandle bayasebenza. [More ...]
Iprojekthi yeSivas-Malatya High-Speed ​​Train Project 4 Ukulanda I-Hourly Way 40
U-AK Party Malatya onguSekela kunye nelungu le-MKYK u-Öznur Çalık uxele ukuba inkqubo ye-CED ye-Sivas-Malatya High Speed ​​Project sele iqalile kwaye iProjekthi yeSantya esiphezulu iya kuba [More ...]
« 1 ... 496 497 498 ... 550 »